Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Mitazona an'i Seychelles ho ambony indrindra ao Hongria
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Travel Wire News
Seychelles any Hongria
Seychelles dia miantoka fa mbola hita maso sy manan-danja amin'ny mpandeha rehetra mety ho tonga izy io, ka mampiakatra ny fampiroboroboana ny fizahantany ny toerana haleha COVID-19 rehefa nanatrika ny fampisehoana an-dalamby Aviareps fanao isan-taona tany Hongria tamin'ny faran'ny Oktobra 2021.
Ny Destination Seychelles dia nandeha nivarotra ireo nosy ary niantoka fa iray amin'ireo toerana malaza indrindra hotsidihan'ny Hongroà.
Ny tapany voalohany tamin’ny atrik’asa dia andiana famelabelaran-kevitra nataon’ny mpandray anjara tsirairay.
Nanaraka izany tamin’ny endrika “round-robin” izay nandraisan’ireo mpandray anjara tamin’ny raharaham-barotra 1-to-1 niaraka tamin’ireo fampirantiana.
Ny fampisehoana an-dalambe dia anisan'ireo hetsika ara-batana voalohany naverina tany amin'ny faritr'i CIS sy Eoropa Atsinanana taorian'ny nahatongavan'ny valan'aretina nandohalika an'izao tontolo izao nandritra ny roa taona farany.
Miaraka amin'ny fampirantiana 15 hafa izay nahitana toerana toa an'i Thailand, Kroasia, Montenegro ary Jamaika, Seychelles fizahan-tany Nanao izay ho afany tamin'ny tsena ireo nosy ary niantoka fa ho iray amin'ireo toerana 'tena lamaody indrindra' hotsidihin'ny Hongroà mandritra ny volana vitsivitsy sy amin'ny 2022.
Nasehon'ny Talen'ny Tourism Seychelles ho an'i Rosia, CIS sy Eoropa Atsinanana, Lena Hoareau, ary Anna Butler-Payette, Tale Mpitantana ny DMC 7° Atsimo eo an-toerana ny toerana halehana any Budapest, Gyor, Debrecen ary Szeged, tanàna Hongroà efatra. Avy amin'ny tanàna mankany amin'ny tanàna dia nilaza tamin'ireo mpandray anjara izy ireo Seychelles dia mijanona ho toerana azo antoka sy mendrika hivezivezena, vonona handray ny mpitsidika azy.
Ny tapany voalohany tamin'ny atrikasa dia andiana famelabelarana nataon'ny mpandray anjara tsirairay avy narahina endrika round-robin izay nandraisan'ireo mpandray anjara tamin'ny raharaham-barotra 1-to-1 miaraka amin'ireo mpandray anjara.
Naneho ny heviny Rtoa Hoareau, taorian’ny famelabelarana, fa mbola misy ny fahalianana lehibe amin’ny toerana haleha ary maro amin’ireo mpandraharaha amin’ny fizahantany no nanamafy fa efa nivarotra fialan-tsasatra maromaro tany Seychelles izy ireo nandritra ny volana ho avy. Nahazo fanontaniana maro hafa koa izy ireo izay mety hivadika ho famandrihana mafy orina, noho izy ireo efa mahafantatra tsara kokoa ny toe-javatra sy ny toe-draharaha any amin'ny toerana haleha.
Mpandray anjara manokana iray izay nandeha tany Seychelles volana vitsivitsy lasa izay tamin'ny fampakaram-bady sy ny volan-tanteliny, dia nitantara ny zavatra niainany momba ny fahatsapany fa ny toerana no toerana tonga lafatra ho an'ny mpivady sy ny mpandeha hafa manandrana mandositra ny COVID-19 sy ny volana ririnina ho avy.
“Mbola misy ny fahalianana lehibe amin'ny toerana haleha izay tombony lehibe ho anay. Ara-dalàna raha misalasala mandeha na aiza na aiza ny olona raha tsy manana fampahalalana marina, ka nataontsika antoka fa takany fa na dia eo aza ny fitsipika vaovao, dia mijanona ho iray amin'ireo toerana azo antoka indrindra handehanana i Seychelles ary manome fahafaham-po tsy misy olana. traikefa”, hoy ny fanazavan-dRamatoa Hoareau.
Nampiany ihany koa fa na dia maro aza ny toerana manana fepetra henjana amin'ny fidirana, toy ny fanagadrana tsy maintsy atao rehefa tonga na mamerina ny fitsapana PCR aorian'ny andro vitsivitsy, Seychelles dia manolotra traikefa tsy misy fotony izay tokony ho antony lehibe fanapahan-kevitra ho an'izay manomana fialantsasatra any ampitan-dranomasina.
“Mitady toerana mahafinaritra hivezivezena any amin'izay ahafahany mandany ny fialan-tsasatra tsy misy fandrahonana tsy tapaka ny COVID-19 ny mpandeha. Ny iray amin'ireo USP matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao
izany - manolotra toeram-pialofana azo antoka ho an'ireo mpandeha izay manana fameperana kely izahay mba hahafahan'izy ireo miala sasatra am-pilaminana sy amim-piadanana.
Raha niresaka momba ny fandraisan'i Seychelles anjara amin'ny roadshow hongroà sy ny hetsika hafa ho avy rehefa miverina tsikelikely ny hetsika ara-barotra ara-batana, hoy ny tale jeneralin'ny fizahantany Seychelles, Ramatoa Bernadette Willemin,
"Mbola tsy azo antoka ny fotoana miaraka amin'ny fameperana tsy mitsaha-miova, fa ny olona dia maniry ny hivezivezy indray ary isika, amin'ny maha-toerana azy, dia tsy maintsy manao izay hahazoana antoka fa rehefa manao izany izy ireo dia i Seychelles no ao an-tampon'ny sainy."
Nanampy Ramatoa Willemin hoe: “Nanampy be dia be ny hetsika virtoaly mba hitazomana ny toerana haleha mandritra ny fihanaky ny valan'aretina, na izany aza, niverina an-dalana indray ireo matihanina amin'ny varotra fitsangatsanganana mba hanohy ny asa. Ny fizahan-tany Seychelles dia tsy maintsy miantoka ny fisiany amin'ny hetsika iraisam-pirenena lehibe mba tsy ho very amin'ny fandraharahana ary ho hita sy manan-danja hatrany ny toerana haleha satria maro kokoa ny toerana manokatra ny sisin-taniny amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Tamin'ny taona 2019, nandray mpitsidika Hongroà 3,721 ny toerana nosy ary 1,629 nanomboka tamin'ny martsa 2021 ka hatramin'ny 31 Oktobra 2021.